Sive site Sakenan, Bali, Indonesia " Journey-Assist - Diving
Pejy fandraisana » Eran-tany / Faritra » Asia » Indonezia » Bali » Toerana Manitrika Sakenan
Toerana antsitrika Sakenan. Diving any Bali
Sakenan Dive Site Review
Sakenan dia iray amin'ireo tranonkala antsitrika Bali izay mety ho an'ny vao manomboka. Any amin'ny faritra avaratry ny Nusa Lembongan Island no misy azy, ao anaty ala honko. Ny vatohara eto dia midina any amin'ny ranomasina, rakotra vatohara goavambe izy io, izay misy akorandriaka sy trondro maro. Ity tranonkala ity dia heverina ho toerana azo antoka indrindra amin'ny toerana rehetra any Bali.
Ny nosin'i Nusa Lembongan, izay misy ny toerana fisitrihana, dia any atsimo atsinanan'i Bali, manodidina ny 12 km miala ny Sanur, akaikin'i Nusa Penida. Nosy kely misy velarana manodidina ny 8 toradroa izy. km ary mponina manodidina ny 5 ny mponina. Ny ankamaroan'ny mponina eto dia miasa amin'ny fambolena, ny laharam-pahamehana ao amin'ny nosy dia ny fambolena ahidrano.
Ny tranokelika Sakenan Diving dia miorina amoron'ny morontsirak'i Lembongan sy akaikin'ny tanànan'i Jungutbatu. Ny anaran'ny tranonkala dia mety ho avy amin'ny tempolin'io anarana io ihany, miorina amin'ny nosy Serangan mpifanila vodirindrina aminy. Haran-dranomasina no misy azy, metatra maromaro no misy azy. Ny toerana misitrika koa dia miafina ao anaty ala honko, ka izay no antony ilazana azy matetika hoe Mangrove. Eto ianao dia afaka mahita mackerel soavaly lehibe (trondro Jack), izay niavian'ny anarana fahatelo amin'ilay tranokala - Jack Point.
Halalin'ny - 6-30 m.
Ny fahitana dia 10 ka hatramin'ny 30 m.
Ny hafanan'ny rano - manomboka amin'ny +18 ka hatramin'ny +27.
Mikorontana be ny ankehitriny.
Fidirana - na avy amin'ny sambo na avy eny amoron-tsiraka.
adiresy: Toya Bungkah Kintamani Desa Pekraman Batur, Songan B, Kec. Kintamani, Kabupaten Bangli, Bali 80612, Indonezia
telefaonina: + 62 821-4468-1554
Misitrika roa - manomboka amin'ny 1 ka hatramin'ny 300 rupees (nofaritan'ny foibe fisitrihana sy ny haavon'ny antsitrika manokana)
Mandrosoa tranonkala Sakenan eo amin'ny sari-tany